> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in MP3
Fursadda in aad rabto in aad doonaa Macdan wadada audio aad files MKV favortie u sahlan loo maqli karo. Xaaladdan oo kale, iyaga diinta MP3 files waa doorasho wanaagsan. File qaab MP3 qaadataa meel aad u yar, oo uu idin ​​wada siiyo qaab music cajiib ah. Si loogu badalo MKV in MP3 si fudud oo dhaqso, waxaad u baahan Video Converter Aamin ah sida Wondershare Video Converter . Sidaa daraadeed, waxaad buuxin kartaa qaab beddelidda effortlessly oo qaab aan muuqan. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan, waa si dhab ah sida ugu fudud ee 1-2-3.
OS taageerayaan: Video Converter (taageertaa Windows 8/7 / XP / Vista) , Video Converter u Mac (taageertaa Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6). Laba nooc wadaagaan feature la mid ah, oo hagahan qaadataa Screenshot Windows.
Talaabada 1: files MKV Load
Riix ah "Add Files" icon inay ku shuban files MKV ka desktop ama fayl kale. Ama kaliya jiidi videos si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo liiska hoos-hoos qaabka, ka dibna dooro "Qaabka"> "Audio"> MP3 ".
Tweak aad goob : Haddii aad rabto in aad beddesho heerka shaybaarka, channel audio, bitrate, iwm inay si fiican u qabtaan baahiyaha ciyaareed aad, waxaad riixi kartaa "Settings" doorasho si ay u helaan suuqa kala goobta. Split aad videos : haddii aad rabto in aan kala tagno ah video dheer dhowr clips, aad si xor ah u dooran kartaa in aad u kala qaybsan tahay oo ay mar ama size.
Tallaabo 3: Ka billow MKV in MP3 diinta
Hadda waxaad u timid inaad tallaabadii u dambaysay, riix "Beddelaan" badhanka si aad u bilowdo diinta. Barnaamijkan waxa aad u hufan oo ku bilig bilig ah indhaha, waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay oo iyaga ku raaxaystaan ​​qalabka la qaadi karo si aad mar walba, meel kasta!
Download video Converter, waayo, diinta ka kaaftoomi-free lacag la'aan ah iyo waayo-aragnimo!